Monday July 26, 2021 - 11:15:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay ismaamulka gobolka Amhara ayaa xaalad heegan ah lagu geliyay dadka kasoo jeedo qowmiyadda Amxaarada si ay ugu midoobaan dagaalka kala dhaxeeya qowmiyadda Tigreega.
Madaxweynaha ismaamulka Amhra ninka lagu magacaabo Agegnehu Teshager ayaa ku amray dadka uu maamulo in si guud ay hubka uqaataan dagaal adagna lagalaan maleeshiyaada jabhadda xureynta Tigree ee TPLF loo yaqaan.
"waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhalinyarada Amxaarada in ay hubka qaataan ayna la dagaallamaan dagaalyahannada Tigreega waa in aan ka barbar dagaallanaa ciidamada Federaaliga ah" sidaas waxaa ku qeyliyay madaxweynaha ismaamulka Amhara.
Baaqan waxaa barbar socda qafaal dagaal gelin qasab ah, waxaa la sheegay in ciidamada Liyuu Booliska Amaxaarada ay howlgallo raaf ah ku qab qabteen dad beeralay amxaara ah iyagoo si qasab ah ku askaraynaya.
dhammaan dhalinyrada amxaarada gaashaan qaadka ah ayaa loo ballan qaaday in lasiin doono hubka dowladda lana geynayo jiidda hore ee dagaalka.
mas'uuliyiinta ismaamulka Amhara ayaa ku cataabay in ciidamada TPLF ay qabsadeen dhowr tuulo oo xuduudda dhaca islamarkaana ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaan magaalada Gondar iyo deegaannada hoos yimaad.
Duullaankii uu Abiy Axmed ku qaaday gobolka Tigray sanaddii lasoo dhaafay ayaa uweecday ismaamullada Cafarta iyo Amxaarada halkaas oo dhul qabsasho ay ka wadaan maleeshiyada TPLF.
Falanqeeyaasha ayaa aaminsan in Itoobiya ay lugta lagashay wixii laga digayay oo ahaa in dagaalka gobolka Tigray uu isku bedlo mid ahli oo ku faafa inta gobolada dalka.